Sumcadda ayaa ah Hooska Madoow ee Maamulka | Martech Zone
Warka waxaa ka buuxa sheekooyin aan caadi aheyn oo bini-aadamnimada dhowaan:
Alex Rodriguez qirayaa steroids (si la yaab leh) laga saaray bogga wararka ee AROD ee MLB.com)
Michael Phelps sawir dheriga qiiqaya. Wuxuu markii dambe lumiyay heshiis weyn oo uu ku aqbalay Kellogg's.
Xitaa Barack Obama wuxuu lahaa dhowr toddobaad oo adag, isku dayga helitaanka xubnaha golaha wasiirada iyo riixaya xirmo dhiirigelin ah taasi waxay leedahay sumcad xumo.
Waxaa jira waxyaabo la wadaago. Mid kasta oo ka mid ah dadkaasi wuxuu ahaa kuwa ugu sarreeya adduunka. Iyagu waxay ahaayeen mas'uuliyiinta ugu dambeeya - qofna xitaa kuma dhowaan karo inuu la tartamo.
Awooddu waa mid ka mid ah waxyaabaha uu qof kasban karo sumcad la’aan. Dhamaan seddexdan nin waxay ahaayeen dad caan ah intaanay helin maamul aan caadi ahayn. Waxay gaareen himilooyin ka baxsan wixii umuuqday inay heli karaan bini aadamka aniga iyo adiga oo kale.
Sanad gudihiis, Madaxweyne Obama wuxuu kasoo guuray Senator aad uyar si uu u gaaro xafiiska ugu sareeya aduunka (muran la’aan) aduunka. 10 sano gudahood, AROD wuxuu ku koray inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican uguna mushaarka badan kubada baseball. Muddo 7 sano ah, Phelps wuxuu noqday Olympian-ka ugu sharraxsan taariikhda, wax aan la aqoon ka hor 2-dii Olombiko ee ugu dambeeyay.
Sumcadda waa wax badan sida hooska oo kale. Had iyo jeer way joogtaa oo had iyo jeer way kula jirtaa. Inta qorraxdu wejigaaga ka ifayso, gadaashaa ayay kaa jirtaa oo, laga yaabee, in la illaaway Haddii aad tahay qof caadi ah, cidina dhag uma dhigin hooskaaga. Si kastaba ha noqotee, markaad istaagto dadka badan, waxaad hoos u dhigi kartaa hoos.
Adduunkan oo wax kasta oo aan qabanno la duubay oo loo heli karo qof walba, waxaan dooneynaa inaan ula qabsanno aadanaha inuu yahay aadanaha. Midkeen inaga mid ahi ma dhammaystirna, mana heli doonno kaamil weligeen.
Markaad ku dadaashid inaad dhisatid maamul, ha ilaawin inaad sumcad ku leedahay halkaas inaad taageerto.
Immisa ayaad ku Bixinaysaa Twitter-ka?
Febraayo 13, 2009 saacadu markay tahay 10: 08 AM
Inta ay qorraxdu wajigaaga ka ifayso, gadaashaa gadaal laga yaabaa oo, laga yaabee, in la illaaway… markaad istaagto dadka badan, waxaad hoos u dhigi doontaa mugdi. ”
Haa… iyo Internetka hadhku wuxuu yeelan doonaa dhagaystayaal dhan 3 Bilyan oo qof xawaaraha iftiinka. Aad ayey u adag tahay in qalad la sameeyo oo la daboolo hadda. Faafinta macluumaadka waa mid deg deg ah.
Feb 13, 2009 markay ahayd 5:28 PM
Astaamuhu waa sida geed oo kale sumcadduna waa sida hooskeeda oo kale. Hooska waa waxa aan ka fikirno; geedku waa waxa dhabta ah. ” Abraham Lincoln
Waxaad kuxirantahay fikirkaaga! 😉
Feb 13, 2009 markay ahayd 6:13 PM
Waxaan runtii ka fikiray inaan soo qaato buug ku saabsan Lincoln. Qaar ka mid ah kanaallada Taariikhda ee soo daahay ayaa goor dambe igu dhegay. Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida tan! Uma qalmo noocaas amaan ah, in kastoo.
Feb 14, 2009 markay ahayd 11:29 PM
Michael iyo ARod labaduba waxay ahaayeen xulashooyin doqon ah, Madaxweynaha, oo leh xulashooyin badan oo uu ku qasban yahay inuu sameeyo, waxay ku xidhan tahay inuu helo khaladaad yar.